Filtrer les éléments par date : lundi, 03 août 2020
La distribution des aides « sosialim-bahoaka » se poursuivent au niveau des six arrondissements d’Antananarivo. Ce 03 août 2020, le Président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina se sont rendus au Coliseum Antsonjombe pour constater de visu la distribution de ces aides sociales pour les familles nécessiteuses du cinquième arrondissement.
Lors de cet évènement, le Président de la République a réitéré que tous les foyers en difficulté, sans aucune exception ni aucune exclusion, recevront cette aide sociale de l’État Malagasy pour faire face à la crise sanitaire.
Anatin’ireo faritany telo izay tena maro olona mitondra ny otrikaretina Covid-19 i Mahajanga. Ho an’ny faritra Boeny manokana dia 210 no isan’ireo hitan’ny fitiliana fa mitondra ny otrikaretina ankehitriny. 111 amin’izy ireo mitsabo tena any an-tokantrano ary ny 22 kosa dia eny amin’ireo hopitaly voatokana amin’izany.
Misy ireo marary ahiahiana ihany koa no efa tsaboina eny amin’ny hopitaly na dia tsy mbola nahavitana fitilina, kanefa maneho ireo fambaran’ilay aretina.
Olana amin’ny tsy ahafahana mifehy ny valan’aretina araka ny tatitra nandritra ny fivorian’ny CRCO Boeny androany, dia ny tsy fihibohan’ireo olona efa voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina. Mbola misy hatrany ny fivorivoriana eny anelankelan’ny Fokontany, ary tsy manao aro-vava sy orona rehefa tsy mahita ireo mpitandro filaminana.
Tongasoa ny namana Balita, hitondra amintsika ireo vaovao misongadina, ary hanao fandalinana ara-politika, sosialy ary ara-toekarena amintsika.
I Balita dia mpanao gazety mana-pahaizana ambony momba ny fandalinana fiaraha-monina.
Raha ny fomba fijeriny dia mitaiza sy manabe olom-pirenena amin'ny alalan'ny vaovao marina sy mitombona no tanjony.
Ny eto amin'ny Gasypatriote moa dia fenitra napetraka ny fahalalahan'ny mpanao gazety amin'ny fomba fijery maro loko ahafahan'ny rehetra mandalina sy manao ny safidy fandalinana avy eo. Tsy misy teritery na lohahevitra fady, ankoatran'ny fifanajana sy ny fahamarinan'ny vaovao ary fanajana ny fenitra maha mpanao gazety.
Hijanona tsy ambaratelo ny momba azy, fa hitatsika miandalana eny ihany ny sangan'asan'i Balita.
lundi, 03 août 2020 19:09
Faritra Analanjirofo: Tsy hita ny filoha mandrak’androany
Maro ireo mifanontany ny amin’ny antony tsy nahatongavan’ny filoha Andry Rajoelina taty Fenoarivo Atsinanana nandritra ny lanonana fametrahana tamin’ny toerany ny Governoran’Analanjirofo, Randriamanantena Marcellin, ny alakamisy 30 jolay lasa teo.
Toy ny niangarana ity olom-boatendry iray ity raha ampitahaina amin’ireo governoram-paritra roa lahy izay notendrena niaraka taminy nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 23 jolay lasa teo.
Nidina tany Mahajanga ny filoham-pirenena mivady telo andro taorian’izay. Anisan’ny anton-dian’izy ireo tamin’izany ny fanatrehana ny famindram-pahefana teo amin’ny lehiben’ny faritra Boeny mpisolo toerana vonjimaika sy ny Governora voatendry Andriantomanga Mokhtar Salim.
Narahan’ny fametrahana ity farany tamin’ny toerany tamin’ny fomba ofisialy izany.
Miisa 100 eo ireo Malagasy mihitsoka any Inde, tsy tafody talohan’ny fikatonan’ny sisintany teto Madagasikara ny 19 martsa 2020 misasak’alina. Nitsabo tena ny ankamaroan’ireo miaraka amin’ny olona nanampy nanaraka azy tany, misy mpianatra vita fianarana, ao ireo niofana nanatevim-pahalalana sy traikefa tany Inde, tao New Dehli sy Bombai indrindra indrindra.
Mitalaho, miantso vonjy izy ireo, nanoratra tany amin’ny masoivoho malagasy any Inde sy tamin’ny filohan’ny Repoblika ihany koa mampahafantatra ny zava-misy iainan’izy ireo any Inde, sy miangavy vahaolana hahafahan’izy ireo miverina an-tanindrazana, fa efa lany vatsy, tsy nanampo ny ho tavela maharitra any Inde noho ny fitsaboan-tena natao tany.
lundi, 03 août 2020 18:55
Fandraharahana: Forme grave ny Orinasa
Misy ny teny hoe personne morale sy personne physique, samy manan'aina daholo ireo, samy manana ray aman-dreny niteraka, mety samy manan-janaka na zafikely. Samy manana kara-panondro, ary samy mety marary na maty mihitsy aza.
Ny personne physique dia isika olombelona, ny personne morale kosa dia ireo Orinasa mijoro ara-dalàna, mandoa hetra, manao adidy amin'ny firenena, satria ny 80% n'ny vola ampiodinana ny toe-karena, anakaramana mpiasa, personne physique, ampandehanana raharaham-panjakana dia ny Orinasa tsy miankina na personne morale avokoa no miantoka azy.
Toy ny personne physique, dia tratran'ny vokatry ny Covid-19 ihany koa ny personne morale na ny Orinasa, tsy anavahana na antitra, na tanora, na ankizy, na ny matanjaka, na ireo marefo ihany koa izany.
lundi, 03 août 2020 13:02
Loholona Rabe François: Nodimandry teo amin’ny faha-84 taona
Mpitandrina FJKM misotro ronono, Loholon’i Madagasikara teo aloha i Rabe François.
84 taona izy izao nodimandry izao. Ao Anosiravo Avaratra, Kaominina Ambatomanga no handevenana azy anio.
Manana ny mariboninahi-pirenena « Grand Croix de 2e Classe » izy.
lundi, 03 août 2020 12:50
3 août: Journée Mondiale du Capoeiriste.
ANS Ampefiloha, CRC Tsiadana, CEG Ambohimiandra, EPP Vohibola, EPP Antanimena, Kianja Angarangarana, Coliseum Antsonjombe, Andranomena no anisany toerana anohizana ny hetsika « Sosialim-bahoaka » izarana tohana ara-tsakafo ho an’ireo fianakaviana sahirana hiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana.
Fianakaviana miisa 1 200 avy no hisitraka izany ao amin’ny Boriborintany Voalohany, Faharoa, Fahatelo, Fahaefatra ary fahaenina ; 1800 kosa ny ao amin’ny Boriborintany Fahadimy.
Natomboka teo amin’ny Kianja Malacam tamin’ny sabotsy 1 aogositra moa ity hetsika « Sosialim-bahoaka » ity.
Posy bisikilety nandalo no nitsorahany voalohany, saingy afa-niala azy, nony nandalo indray kamiao iray, tsy mitondra entana, avy ao Antananarivo hiazo an’i Toamasina dia iny no nitsorahany.
Tampoka tamin’ny mpamily ny tranga, tsy nisy azo nialana. Voahosin’ny kodiarana aoriana teo amin’ny faritry ny lohany ilay lehilahy tsy dia salama saina, ary maty tsy tra-drano.
Teo Ambalatenina, tsy lavitry ny biraon’ny Jirama Brickaville no niseho ny loza, ny sabotsy 1 jolay tokony ho tamin’ny 8ora sy sasany maraina.